Home/ England/Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartoyda Shanta Horyaal Ee Yurub Ugu Weyn
AbDi RaHmAn AdAnI, Reporter January 6, 2018
Maalin wanaagsan, dhamaan saaxiibada ku taxan Shabakada Wararka Cyaaraha ee laacib.so, waxaad kusoo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ee Shanta horyaal ee Yurub, maalintiisii Shanaad:
Liverpool, ayaa waxay xiriir ay la samesay kooxda Leicester City, xili Jurgen Klopp, uu doonayo inuu lasoo wareegto Mahrez [The Sun]
Xidiga Chelsea ee Eden Hazard ayaa wuxuu iska diiday dalabkii Labaad oo uga yimid Real Madrid, oo xiiso waali ah uqabta. [Daily Star]
Sida ay sheegayaan wararka, Manchester United ayaa waxay xiiseyneysaa inay qandaraas kordhin ay usameyso Juan Mata, Ander Herrera, Ashley Young iyo Daley Blind, oo uu heshiiskooda ka harsan yahay 12 bilood.
Philippe Coutinho ayaa wuxuu ku biiri doono Barcelona, xili Liverpool, ay dalbatay inay ku ogolaan doonto aduun dhan 145 inuu kaga tago Anfield. [Daily Mail]
Manchester City, ayaa waxay ku darsatay Shaxdeeda laacibka Arsenal, ee Alexis Sanchez, iyadoona dooneysa inay ku bedalato Gabriel, oo labo bilood maqanan doona. [Daily Mail]
Manchester United ayaa waxay diirada saari doontaa sidii ay usoo qaadan lahayd daafaca Spurs ee Danny Rose, maalmaha soo aadan. [Manchester Evening News]
Liverpool, ayaa waxay rajeyneysaa inuu baaqi kusii ahaado Anfield, laacibkeeda Emre Can, inkastoo la sheegayo inuu wiilkaan heshiis la galay Juventus. [Liverpool Echo]
Man City ayaa waxay kula dagaalameysaa kooxaha kala ah: Inter Milan iyo AC Milan saxiixa laacibka Tottenham daafaca uga dheela ee Mousa Dembele. [Sky Sport]
Liverpool ayaa waxay isku deyi doontaa inay booska Coutinho ay ku bedasho kubad sameeyaha Leicester City ee Riyad Mahrez. [L’Equipe, in French]
Ugu dambeyn, Barcelona ayaa waxay ku dhowdahay inay lasoo saxiixato daafaca reer Colombia ee Yerry Mina, kaasoo hada udheela naadiga Brazil ka dhisan ee lagu magacaabo Palmeiras [Mundo Deportivo in Spanish]
James Oo Daboolka Ka Qaaday Sababta Uu Zidane U Dheelsiin Waayey Markii Uu Real Joogay
Kooxda kubada cagta ee Heegan ayaa guul ka gaartay kooxda FC Banaadir